विद्युतीय सवारीसहित यी हुन् नाडा अटोशोमा प्रदर्शन गरिने मुख्य ब्राण्ड
काठमाडौं– नेपाल अटो मोबाइल्स एसोसियसन (नाडा)ले आयोजना गर्न लागेको नाडा अटो शो मंगलवार देखि शुरू हुँदै छ ।
सवारी साधनको कुम्भ मेलाका रूपमा मानिने अटो शोमा यस वर्ष ४२ ब्राण्डका सवारी साधन प्रदर्शन गर्ने यसअघि नै जानकारी गराइसकेको छ ।
सवारी साधनसँगै सम्बन्धित अन्य वस्तुहरू जस्तै लुब्रिकेन्ट्स, सवारी पार्टपूर्जा गरी ८२ ब्राण्ड प्रदर्शनमा रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ । विभिन्न ब्राण्डका लुब्रिकेन्ट्स, टायर लगायत ८२ ब्राण्ड प्रदर्शनमा राखिने नाडाले जानकारी दिएको छ ।
नाडाका अनुसार प्रदर्शनीमा २३ ब्राण्डका चार पाङ्ग्रे, १९ ब्राण्डका दुईपाङ्ग्रे, १२ ब्राण्डका लुब्रिकेन्ट, ९ ब्राण्डका टायर, ५ ब्राण्डका ब्याट्री र १४ ब्राण्डका पार्टपूर्जा एवम् ग्यारेज उपकरण गरी ८२ ब्राण्डका वस्तु प्रदर्शनमा राखिने भएका हुन् ।
कुन-कुन हुन् चार पाङ्ग्रेका ब्राण्ड ?
मंगलवारदेखि सञ्चालनमा हुन लागेको अटो शोमा चार पाङ्ग्रे ब्राण्डतर्फ इसुजु देखि फोर्ड्स ब्राण्डम्मका २३ ब्राण्डका सवारी साधन प्रदर्शन गरिने छन् । नाडाका अनुसार इसुजु, हुन्डाई, फक्सवागेन, रेनो, ड्याटसन, सुजुकी, होन्डा, एमजी, फियात, जीप, साङयोङ, टोयोटा, महिन्द्रा, प्यूजो, फोटोन, टाटा, माज्दा, मित्सुविसी, निसान, बीवाईडी, किया, दाय र फोर्ड ब्राण्ड प्रदर्शनमा राखिने छन् ।
कुन-कुन हुन् दुई पाङ्ग्रे ब्राण्ड ?
नाडा अटोशोमा १९ ब्राण्डका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रदर्शन गरिँदै छन् । नाडाका अनुसार यामाहादेखि बीएमडब्ल्यूसम्मका १९ ब्राण्डका गाडी प्रदर्शन हुने भएको छ ।
यामाहा, सीएफमोटो, बेनेली, भेस्पा, अप्रिलिया, रोयल इन्फिल्ड, होन्डा, केटीएम, सुजुकी, हिरो, बजाज, रनर, एमभी अगस्टा, टीभीएस, मियामा, एनआइयु, सुपरसो, जीपीएक्स र बीएमडब्ल्यु ब्रान्डको प्रदशर्न गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच आयोजक नाडाले यस वर्षको नाडा अटो शोको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । नाडाका प्रवक्ता अनुप बरालले प्रदर्शनीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘म अहिले पनि यही भृकुटीमण्डप मै छु, ।’ नाडा अटो शो प्रत्येक वर्ष भृकुटीमण्डपमा नै हुने गरेको छ ।'
यस वर्षको नाडा अटो शोमा सबै ब्राण्डका स्टलसहित १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका स्टल गरी ९५ वटा स्टल राखिने नाडाको भनाइ छ ।
विद्युतीय सवारी प्राथमिकतामा
यसवर्षको नाडा अटो शोमा विद्युतीय सवारी साधन पनि मुख्य प्राथमिकता राखिने भएका छन् ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार छुट एवं बैंकहरूले पनि विद्युतीय सवारी साधन खरीदमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने भएकाले विद्युतीय सवारी साधन नाडाको प्राथमिकतामा परेको नाडाका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले विद्यतुीय सवारी साधनमा भन्सार छुटको घोषणा गरेसँगै ग्राहकहरूको ध्यान समेत विद्युतीय सवारीमा गएको भन्दै नाडाले करीब एक दर्जन मोडेलका विद्युतीय सवारी प्रदर्शनमा राख्ने भएको हो ।
नाडाका अनुसार महिन्द्राको ईटुओ तथा इभेरिटो लगायतका विभिन्न मोडेलका विद्युतीय सवारी प्रदर्शनमा राखिने भएका हुन् । त्यस्तै सिप्रदी ट्रेडिङले टाटाको विद्युतीय सवारी पनि अटोशोमै सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी बीवाइडी लगायतका कम्पनीहरूले नयाँ विद्युतीय सवारी नाडा अटोशोमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।